I-adaptha yaseShayina engu-65w ye-gallium nitride 12 kudokhu engu-1 Yohlobo C(2 koku-1) abakhiqizi nabaphakeli |Wellink
I-adaptha ye-gallium nitride engu-65w 12 kudokhi yohlobo C engu-1(2 ku-1)
Imodeli: OS- KZ001
Isixhumi esibonakalayo semisebenzi eminingi, sifanele izinhlobo ezihlukahlukene zemishini: uhlobo-C/F PD60w, USB3.0 5Gbps, HDMI 4K HD, Gigabit Ethernet port 1000Mbps, VGA1080P, TF/SD card slot 3.0, Umsindo one-Mic 3.5mm, Uhlobo- C PD 18w.
I-HDMI, USB 3.0*3, gigabit network port, PD chargingport*2, SD/TF card slot, 3.5mm audio, Type-C 3.1, VGA
(CN,US GB, AU) ubude 1.5M
2. isekela ukudluliswa kwevidiyo okungu-4K 40Hz, i-E-Marker chip
3. isekela ukushaja okuphezulu kwamanje kwe-PD 100w
isiliva, ebomvu, empunga yesikhala, eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okotshani
• Idizayini ye-MacBook: I-MOKiN USB C HUB idizayinelwe ngokukhethekile i-MacBook Pro 2020/ 2019/ 2018/ 2017/ 2016, 13&15.4&16", Macbook Air 2020/2019/2018. I-HUB inezimbobo ezimbili ze-4K 60Hz0 HDMI, 60Hz0 HDMI imbobo, ukulethwa kwamandla okungu-87W, imbobo ye-Ethernet engu-1000Mbps, 2 x imbobo ye-USB 3.0, imbobo engu-2 x USB 2.0, isifundi sekhadi le-SD/TF esingu-3.5 mm imakrofoni/umsindo. Qaphela: Le hubhu ayikwazi ukunweba isikrini se-MacBook ngechip M1.
• Isekela izibonisi zesikrini ezintathu: isiteshi sokudokha se-MOKIiN USB C, esisekela ukuboniswa ngesikhathi esisodwa ezikrinini ezintathu, singakhuphula ukusebenza kahle kwakho izikhathi ezintathu.Izimbobo ezimbili ze-HDMI zisekela ukulungiswa kokufika ku-4K 60Hz.Imbobo ye-VGA isekela izinqumo ezifika ku-1080p 60Hz.Sicela uqaphele: Uma ufuna ukubona imodi ethuthukisiwe, udinga iMacBook ene-DP1.4, ngaphandle kwalokho isikrini esiphumayo singafinyelela ku-4K@30Hz kuphela.
• Isikrini esikabili: ungasebenzisa i-HDMI ezimbili kanye nesixhumi esibonakalayo se-VGA esisodwa ukuze unwebe ngesikhathi esisodwa.Nokho, uma usebenzisa izimbobo zevidiyo ezintathu ngesikhathi esisodwa, enye yezimbobo ze-HDMI ne-VGA ingaba kumodi yesibuko kuphela, kanti enye imbobo ye-HDMI ikumodi yokunweba.Uma usebenzisa kuphela izimbobo ze-HDMI ezimbili ngesikhathi esisodwa, ungaqalisa imodi yokunweba.
• Isiteshi sokudokha se-MoKiN esinembobo ye-Ethernet engu-1000 Mbps, ungalanda amamuvi ngokushesha, udlulise amafayela futhi unciphise ukubambezeleka emidlalweni.Izimbobo ezimbili ze-USB 3.0 zisekela amanani okudlulisa idatha afika ku-5Gbps.Ukufunda amakhadi e-SD nawe-TF kuthatha imizuzwana embalwa kuphela.Izimbobo ezimbili ze-USB 2.0 zifaneleka kangcono amagundane, amakhibhodi noma amanye amadivaysi.
• Ikhadi le-SD nekhadi le-Micro SD lingasetshenziswa ngezinga lokudlulisa elisheshayo elifika ku-40 MB/s.Ungadlulisa izithombe noma amavidiyo akho usuka kukhamera uye kukhompuyutha ephathekayo ngemizuzwana.Imbobo yokushaja engu-87W USB ikuvumela ukuthi ushaje i-MacBook yakho kanye namanye amalaptop ahambisanayo e-USB C PD nama-smartphone.Sicela uqaphele: Sebenzisa ne-adaptha yoqobo yocingo lwakho.
• Le adaptha iyisincomo esihle sekhompuyutha ephathekayo ye-USB-C yakho entsha.Ngale adaptha, ungasakaza / wandise amavidiyo ngembobo ye-2HDMI/VGA kusuka kukhompyutha yakho ephathekayo / imonitha / iprojektha / i-TV.Futhi ungasebenzisa izimbobo ezi-2 ze-Supper Fast Speed ​​​​USB 3.0 (isivinini esifika ku-5 Gbps) ukuxhuma ama-hard drive akho e-USB C Latops yakho entsha, kanye ne-2 USB 2.0 Prot ukuze uxhume ikhibhodi yakho, igundane (ngaphandle kokulibala) kanye nama-SD amabili asebenzayo kanye Isifundi sekhadi le-TF lokudlulisa ividiyo/isithombe (kufika ku-104 Mbps), i-Gigabit Ethernet LAN.- Isixhumi sesimo Senethiwekhi esizinzile (kufika ku-1000 Mbps) kanye noxhumano lomsindo we-HD (usekelo lomsindo/umbhobho (okujwayelekile kwe-CTIA)).
• Yakhelwe i-MacBook Pro/MacBook Air, isekela imodi yokunweba kanye nemodi yesibuko.
• Ngicela uqaphele:
• Uma kuphela i-HDMI exhunyiwe, isikrini singabonisa i-4K@ 60Hz.I-intshi engu-15 kuphela ne-16 inch MacBook Pro engafinyelela ku-4K @ 60 Hz, i-13 inch MacBook Air ingafinyelela ukulungiswa okuphezulu okungu-4K @ 30 Hz.) Uma i-HDMI ne-VGA zixhumeke ngesikhathi esisodwa, isikrini sibonisa u-1080P@60Hz.
• Ihambisana no-15 inch/16 inch 13 inch MacBook Pro 2016/2017/2018/2019/2020 noma kamuva kanye ne-13 inch MacBook Air 2018/2019/2020 noma kamuva
Umbuzo:Ingabe i-adaptha yamandla ifakiwe, noma kufanele usebenzise i-adaptha yamandla ye-macbook usb-c ukuze unike amandla i-docking?
Impendulo:khasimende elithandekayo,Siyabonga ngesicelo sakho.Isiteshi sethu sedokhi siyipulaki futhi siyadlala futhi sidinga ukunikwa amandla yi-MacBook yakho.Ukuze uthole ulwazi olunzulu ngomsebenzisi olungcono, sincoma ukuthi uxhume ukushaja kwe-PD ngenkathi uxhuma isiteshi sokudokha.
Umbuzo:Ngingakwazi ukuxhuma amamonitha amabili ku-macbook air m1 yami ngalokhu?
Impendulo:Uma unamachweba amabili e-USB-C ohlangothini olulodwa lwakho lwe-Mac - yebo ungakwenza.Njengoba ubona, ipulaki kukhompuyutha inezimbobo ezimbili ze-USB-C.
Umbuzo:Ingabe idivayisi idinga ukufakwa kohlelo lokusebenza nezishayeli noma imane ixhumeke futhi idlale?
Impendulo:Ayidingi lutho.Isebenza kahle ngemizuzwana.
Okwedlule: 7in 1 USB3.0 Type-C3.0 to HDMI Type-C SD/TF Docking station for Surface Pro 7
Olandelayo: I-Type-C 15w i-HUB engenantambo (12 ku-1)